Johane Chitsauko 07. Mvura yeHupenyu kubva paMuchinjikwa
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Johane Chitsauko 07. Mvura yeHupenyu kubva paMuchinjikwa
Jesu akadzoka kubva kuEgipita ava mukomana, akakurira muNazareta.
Akabva aenda kunogara muKapenaume.
MATEO 4:13 Zvino wakabva Nazareta akandogara Kapenaume pagungwa. Pamiganhu yeZaburoni neNaftarimi.
Jesu paakadzinga vaitengesa nevaiita mari muTembere pedyo nepamavambo ehushumiri hwake, maJuda vaive muJudea vakabva vada hondo naye. Chinangwa chikuru chechitendero chavo kwaive kuita mari.
Hupfumi hwemuTembere hwaive ndihwo hukurusa muJuda (yakadaidzwawo kuti Judea kuna Johane 7:1).
Paakaponesa musi weSabata (Mugovera), vakatsvaga kwazvo kmupomera kuti aive ashanda. Asi maprista evaJuda vaishanda musi weSabata vachigadzirira mutambo yemuTembere.
Aive Mwari pamuviri. Emanueri – Mwari unesu.
Zvishamiso zvaakaita zvaive humbowo hwaive pachena kuti Mwari aive maari.
Messiasi aizozvarwa nemhandara aizova Mwari wamasimbaose, Baba vokusingaperi.
Saka maJuda vairamba Messiasi wavo nekuda kwehunhu hwake hwavaive vavimbiswa kare. Messiasi aifanira kuva Mwari pamuviri.
MaJuda vaive vatadza zvachose kugamuchira kuti chiprofita chaive chichizadziswa. Chekuti Mwari aive aburuka panyika ari munhu.
Hurongwa hwekumuuraya hwaive hwatanga kukura.
666 inotirangaridza pamusoro pechiratidzo chechikara. Tinoona izvi kuna Johane 6:66.
Chiratidzo chechikara chinotiita kuti tirambe Shoko raMwari rakanyorwa. Tinobva tatanga kuti mune zvakakanganiswa muBhaibheri.
Vanhu vanoda zvishamiso zvaanoita, asi havana rudo rwechokwadi chinoparidzwa.
Nokuzvizivisa kuti aive ani, Jesu akatsamwisa vazhinji vaimutevera, akaita kuti vavengi vake vadise kwazvo kumuuraya.
JOHANE 7:1 Shure kwaizvozvo Jesu wakafamba muGarirea; nokuti wakanga asingadi kufamba muJudea, nokuti vaJuda vakanga vachida kumuvuraya.
Juda ndiyo yaive Judea.
Jesu aive adzingwa muJudea. Saka akanoshumira muGarirea kwaaive ari kure nevavengi vake kuJerusarema.
KuTembere ndiko kwaive kumuzinda wekutenda kwemaJuda, ndiko kwaive kwakawandira vaimupikisa. Dutu reruvengo raive rasimuka richimupikisa kwazvo raizomusimudza pamuchinjikwa.
Nekunatsa Tembere, Jesu akaisa panjodzi bhizimisi ravo rekuita mari nechitendero.
Saka vaizoita chero chavakwanisa kuti vamubvise. Vatungamiri vezvitendero vanotaura pamusoro pemibairo yedenga, asi vanopfumba zvibhakera zvedare pamusoro pemari pano panyika.
JOHANE 7:2 Zvino mutambo wavaJuda wamatumba wakanga uri pedo.
Mutambo weMatumba mucherechedzo wemakore 1000 erugare anouya mumashure mehondo yepaAmagedhoni. Inowanzodaidzwa kuti Mereniyamu.
Nekukoshesa mutambo uyu, Jesu anotiyeuchidza kuti makore 1000 ndeekupemberera kukunda pamusoro perufu. Ndipo vatsvene pavachatonga nyika. Vachange vari mumiviri yavo yekubwinya yakafuka kusavora yakamutswa kubva kurufu.
I VAKORINTE 6:2 Hamuzivi here kuti vatsvene vachatonga nyika?
Zvinoprofita kukunda nebudiriro yake pahondo yeAmagedhoni. Chikara nehondo dzake zvichadeura ropa razvo pamamaira mazana maviri (320 km). Ropa ravo richagutsa nyika kuita mufudze wayo uye kuiita kuti ive nezvibereko zvinoyevedza kwemakore 1000.
Pane mastadia masere mumaira rimwechete. (mastadia mashanu mukiromita rimwechete).
Shiri dzedenga dzinodya nyama, dzakaita semakondo, ndidzo dzichadya mitumbi yavo.
ZVAKAZARURWA 19:17 Zvino ndakavona mutumwa amire muzuva; akadanidzira nenzwi guru, achiti kushiri dzose dzinobhururuka pakati pedenga: Vuyai, muvungane pachirayiro chikuru chaMwari.
18 Kuti mudye nyama yamadzimambo, nenyama yavakuru vezvuru zvamazana, nenyama yavanesimba, nenyama yamabhiza, neyavatasvi vawo nenyama yavanhu vose vakasununguka navakasungwa, vaduku navakuru.
Mutambo uyu -- mutambo weMatumba – chivimbiso chekukunda. Jesu aivewo akatarisa kukunda kuri mberi muhondo huru nechivi negehena naDiaborosi paCalvari. Hondo yakaipisisa yaaizorwa, asi achikunda.
JOHANE 7:3 Naizvozvo vanun’una vake vakati kwaari: Ibva pano, uende Judea, kuti vadzidzi vako vavone vo mabasa ako aunoita.
Vanun’una vake, vakaberekwa naJosefa naMaria mumashure mekuberekwa kwaJesu.
MARKO 6:3 Ko uyu haazi muvezi here, mwanakomana waMaria, nomukoma waJakobo naJose naJuda naSimoni? Nehanzvadzi dzake hadzisi pano pakati patiri here? Vakagumburwa naye.
Vanun’una vake vakamuudza kuti aburukire Jerusarena kumutambo. Jerusarema kwaizova nevanhu vazhinji. Ndiyo nzvimbo yaaizoonekwa. Muruzhinji rwaive Jerusarema ndiko kwaaizowana vateveri vazhinji. Sekunge Jesu aida kuwanda kwevanhu.
JOHANE 7:4 Nokuti hakuno munhu unoita chinhu chinyararire, kana iye amene achida kuzikamwa; kana iwe uchiita izvi, uzviratidze kunyika.
Zano ravo raive rekuti “Garirea kwaive kusina vanhu vazhinji. Usatambise nguva ikoko. Enda panhandare huru yaive Tembere. Ikoko aizozviitira zita guru” ndiro raive zano raakapuhwa nemhuri yaakaberekwa nayo.
"Kana iwe uchiita izvi,": Vanun’una vake vaive vasingavimbi maari zvechokwadi.
"Kana" -- Shoko rinodiswa naSatani.
MATEO 4:3 Zvino muidzi akavuya kwaari, akati kwaari, kana uri Mwanakomana waMwari raira kuti mabwe awa zvive zvingwa.
Satani ndiye mudyari wemhodzi yekukakavara.
“Kana” pakarepo rinoisa kukakavara mumoyo memunhu anenge achitaurwa naye.
JOHANE 7:5 Nokuti navanun’una vake vakanga vasingatendi kwaari.
Hama dzake dzemhuri dzepedyo dzaive disingavimbi maari.
Nhasi, mapasita anoita hushe hwemhuri dzavo nekusiya vana vavo kuti vagovatsiva. Izvi zvinoita kuti mari irambe iri mumhuri yavo, vachigadzirirawo mudyandigere wakanakisa, kana zvichibvira.
Mumazuva aJesu zvaive zvisina chazvaibatsira kuva mumwe wemhuri yaakaberekwa. Vaitomupikisa, vachimupa mazano akaipa.
Jesu haana kusarudza vemhuri yake kuti vave vadzidzi vagoparidza. Kana Eria.
Iyi iyambiro yakanaka kumakereke anhasi.
JOHANE 7:6 Ipapo Jesu akati kwavari: Nguva yangu ichigere kusvika; asi nguva yenyu inogara yakagadzirwa
Iyi yaive nguva isiyo, yaive nguva yemutambo weMatumba. Nguva yaJesu yakafanira yaiuya yekuti agouraiwa ari Gwaiana rechibairo rePaseka pamutambo wePaseka waitevera.
Vanun’una vake vaive nenguva zhinji. Nekuti havana kupikisa vatungamiri vechiJuda, vaive vasina chaivadzivisa kana njodzi yavaizosangana nayo pamutambo. Nekufamba kwenguva vaigona kuzova vatendi.
MABASA 1:14 Ava vose vakatsungirira nomoyo mumwe pakunyengetera, nokukumbira navakadzi, naMaria, mai vaJesu, navanun’una vake.
JOHANE 7:7 Nyika haingakuvengiyi imi; asi inondivenga ini, nokuti ndinoipupurira, kuti mabasa ayo akaipa.
Jesu aive aburitsa pachena mirairo yenhema yaive yaitwa nevaprista pamusoro peSabata, yakaita sewekuti hamugoni kurapa munhu, asi munogona kuburitsa chipfuwo chinenge chawira mugomba. Kana kunonwisa zvipfuyo.
Kuzivisa kuti dzidziso haina kubva muMagwaro kunobereka ruvengo rukuru kubva kuvaparidzi vedzidziso iyoyo inenge yakaipa.
JOHANE 7:8 Kwirai kumutambo imi, ini handisati ndokwira kumutambo, nokuti nguva yangu ichigere kusvika kwazvo.
Vanun’una vaJesu vaive vasata vabvira vaburitsa pachena kutadza kwaidzidziswa nevaprista vaFarise nevaSeduse. Saka vaikwanisa kuenda kumutambo vakanotambirwa.
Vaparidzi havafari kana kutadza kwavo kukaburitwa pachena. Ndicho chikonzero nei vaivenga Jesu. Aive asingatyi kuvapikisa uye kuvaudza pavaitadza.
Nekuvapo kwenguva pfupi inoda kuita hafu yemutambo, Jesu aive asingapi vakuru vezvitendero nguva yakakwana yekugadzirira kumuuraya. Nguva yake yakazara yaizosvika pamutambo wePaseka yaitevera. Aive asingadi kutanga bopoto kana bope nguva isati yakwana.
JOHANE 7:9 Wakati areva izvozvo kwavari, akagara Garirea
10 Zvino vanun’una vake vakati vakwira kumutambo, iye akabva okwira vo, asingaendi pachena, asi panenge sapakavanda.
Aive asingadi kuonekwa.
11 Zvino vaJuda vakamutsvaka pamutambo, vakati: Uripiko iye?
Zvishamiso zvaaive aita zvaive zvamupa mbiri yakanakisa. MaJuda vaitomutsvaga vega.
12 Kun’un’una kukuru kukavapo pakati pavazhinji pamusoro pake, vamwe vachiti: Wakanaka; vamwe vachiti: Kwete, unotsausa vanhu vazhinji.
Vanhuwo zvavo vaifunga kuti aive akanaka, nekuda kwezvishamiso zvaaiita, maJuda aida mbiri kubva kuvakuru vezvitendero vaingotevedzera kushora kwevatungamiri vezvitendero zvavo vaivenga Jesu.
13 Kunyange zvakadaro kwakanga kusinomunhu waitaura pachena pamusoro pake, nokuti vakatya vaJuda.
Dzimwe nhau dzekuwisirwa pasi. MaJuda vaive vasingadi Jesu vaive vachizvipira kuita zvehondo kune chero munhu aitsigira Jesu. Kutonga nekutyisidzira ndiko kuvakwa kunoitwa zvirongwa zvezvitendero. Itai zvatinokuudzai. Musazvifungira pachenyu. Musaedze kana paduku pose kupokana nevakuru vezvitendero. Vanhuwo zvavo vanoda kutaura nezvake nezvishamiso zvaakaita, asi pese paisvika mutungamiri wezvezvitendero akaita semuFarise, pakarepo paibva paita runyararo. Kutya kwaive kwazara pamusoro peJerusarema segoredema remweya une chefu. Chinhu chakaipa chaive chabvisa rusununguko rwese rwavaive narwo pakutaura. Vaitya kufa nekuuraiwa. Chinhu chikuru chakaipa chaive chakamirira kuitika.
JOHANE 7:14 Zvino kwakati pava pakati pomutambo, Jesu akakwira kutembere, akatanga kudzidzisa.
Pakarepo pakati pemutambo Jesu akaonekwa.
15 Naizvozvo vaJuda vakashamiswa, vachiti: Munhu uyu unoziva seiko manyoro, zvaasina kumbodzidza?
Kudzidzisa kwake kwaive kwakafemerwa. Kwaive kwakanakisa kwazvo kudarika kwevakuru vezvitendero. Asi Jesu aive asina kana kubvira aenda kuchikoro chaidzidzisa vana Rabi (vadzidzisi). Rabi harisi shoko rakamboonekwa muTestamente Yekare. kuwedzera izwi rekuti Rabi kuTestamente Yekare kunoipisa Testamente Yekare.
Kurudziro yaJesu yakakurira zvakazara mitemo yakaitwa nevanhu nehuranda hwanaRabi, vaFarise nesinagogue.
Vaiti, “Angaziva sei zvakawanda kudarika isu kana asina kubvira adzidza kuva Rabi muchikoro chinozivikanwa chehurabi”. Vakafuratira chinhu chekuti vanaRabi havana kubvira vakaonekwa kana kutaurwa mumurairo waMosesi.
Nekuita chinzvimbo ichi, vakaparadza murairo waMosesi. Zvimwechete zvinogona kutaurwa pamusoro pezvinzvimbo zvevaSeduse nevaFarise. Zvese zvakaitwa nevanhu. Zvaive zvisiri muMurairo chaiwo wekutanga.
"Munhu uyu unoziva seiko manyoro ": Tarisai kushaiwa kwavo rukudzo. Kuparidza kwaJesu kwaive kuri maererano neTestamente Yekare zvakazara nemazivisirwo ayaizoitwa kunyanya muzvikamu zvezvakaprofitwa. Asi vaingomudaidza kuti “munhu uyu”.
Asi vatungamiri vavo vaivarasisa nedzidziso dzisimo muMagwaro, vaidaidzwa nezita rechinzvimbo rakaita serekuti “Rabi”, zvaiita kuti vakudzwe.
JOHANE 7:16 Jesu akapindura, akati: Dzidziso yangu haizi yangu, asi ndokwowakandituma.
Nei Jesu aigonesa kudai? Mweya waMwari waive maari waimudzidzisa dzidziso. Hamungave vari nani kudarika iye. Simba raMwari raive muzvishamiso zvaaiita rakaita kuti zvive pachena kuti aive atumwa naMwari.
Jesu akazvizivisa seakanga atumwa neMweya waMwari, aigara maari. Aive asiri mudzidzi wemaPrista kana vanaRabi. Izvi zvakatsamwisa vatungamiri vemaJuda. Jesu akavakurira zvakazara uye zviri nyore.
JOHANE 7:17 Kana munhu achida kuita kuda kwake, uchaziva kana dzidziso ichibva kunaMwari, kana ndichazvitaurira ndimene.
Dzidziso yaifanira kutenderana nezvakanyorwa muMagwaro muTestamente Yekare. Magwaro ndiwo kuda kwaMwari. Kana dzidziso kana mharidzo ikaratidza Magwaro akasiyana siyana apo pfungwa imwechete inorondwa muBhaibheri, munofanira kuziva kuti izaruriro yechokwadi.
Kuparidza hakusi kutaura zvamunofunga pamusoro pedzidziso.
JOHANE 7:18 Unozvitaurira, unotsvaka kukudzwa kwake; asi unotsvaka kukudzwa kwowakamutuma, ndiye wazvokwadi, hapana kusarurama maari.
Vaparidzi vanoda kuratidza kukosha kwavo muhurongwa hwaMwari. Vanoisa zvavanofunga ivo padzidziso dzavanodzidzisa. Mharidzo dzechokwadi hadzitauri pamusoro pemuparidzi, asi dzinonongedzera kuzadziswa kweMagwaro, sezvo dzichizivisa zano raMwari achishanda nerudzi rwevanhu.
Kana Magwaro asingatauri pamusoro pemuparidzi, muparidzi iyeye haafaniri kuzviisa pamharidzo.
Zvatinofunga zvichafa nesu.
Pasina kureva kweMagwaro, unenge ungori umwe munhu ane mifungo yakaipa.
Kutevera chokwadi muMagwaro akanyorwa akasiyana ndiyo nzira yakanaka chete yekudzidzisa.
JOHANE 7:19 Mosesi haana kukupai murairo here? Asi hakunomumwe wenyu unoita murairo. Munotsvakireiko kundivuraya?
Mombe dzinoda kupihwa chikafu nemvura musi weSabata, musi weMugovera. Vaprista nevaSeduse vaishanda muTembere vachiita zvirongwa zvekuti vanamate musi weSabata. Tsaona dzaisanganikwa nadzo dzogadziriswa, dzakaita sekuburitsa mombe kubva mugomba musi weSabata, Mugovera.
Zvino Jesu akazivisa ndangariro dzavo. Dzekuti vaida kumuuraya.
JOHANE 7:20 Vanhu vazhinji vakapindura, vachiti: Unomweya wakaipa iwe; ndianiko unotsvaka kukuvuraya?
Ndangariro dzavo dzaive dzaziviswa. Asi nekuti vaive vasati vazviita, vakanyepa vakazviramba. Nekutaura nhema idzi vakaputsa vega murairo wavo.
Kuita kwavo kunge vaisada kumuuraya, apo humondi hwaive hwakazadza moyo yavo, kwaive kunyengera kwega. Chibereko chakawora cheboka rechitendero.Vanhu vanopfeka chivharachiso chinoratidzika zvakanaka, asi moyo yavo yakazadzwa nekuipa.
JOHANE 7:21 Jesu akapindura, akati kwavari: Ndakaita basa rimwe, mukashamiswa mose.
Vaive vakavengera Jesu kuporesa nemusi weSabata. Vaive vasina tsitsi mavari. Vaimuti aive achishanda. Izvi zvaive nhema nekuti akaponesa kupfurikidza kutaura, kwete nekuita chero chinhu.
JOHANE 7:22 Nemhaka iyi Mosesi wakakupai dzingiso, (handiti ndeyaMosesi, asi yamadzibaba); zvino imi munodzingisa munhu nesabata.
Kudzingisa kwaiitwa zuva rechisere. Saka kana zuva rechisere raive Mugovera, maprista vaizoita basa rekudzingisa munhu musi wemugovera. Uku kwaive kuita kwekuti zvaitofanira kuitwa.
Mwari akapa kudzingisa kuna Abrahama asati apa zuva reSabata kuna Mosesi.
Saka Sabata waive usiri murairo wakanyanya kukosha. Kudzingisa kwaive kwakakosha. Saka zvakadaro paive nekurwisana kwaive mukati memurairo.
JOHANE 7:23 Zvino kana munhu angadzingiswa nesabata, kuti murairo waMosesi urege kuputswa, ko imi monditsamwira nokuti ndakaporesa munhu zvakakwana?
Kana muchitenderwa kukuvadza (kudzingisa) musi weSabata, munotadza nei kuporesa pazuva rimwechete iri?
Saka kana maJuda vakaita basa pamunhu rekumucheka, vakakonzera kurwadziwa kukuru nekubuda ropa, nei vakatsamwa apo Jesu akaponesa munhu asina kana zvizhinji zvaaive ataura.
JOHANE 7:24 Musatonga nezvinovonekwa, asi tongai nokutonga kwakarurama
MaJuda vaiedza kurwira tsananguro dzavo pamusoro pekushanda musi weSabata nenzira dzisimo muMagwaro. Vaive vakatsamwa kuti Jesu aivakurira. Vaive vabvuma kupomera Jesu. Saka vaingoda kutsvaga mhosva, nekuti vaida kuti ave nemhosva. Paive pasina kuitika kwezvinhu nenzira yechokwadi. Vaive vasingaedze kutonga kuti chiito chaive chakanaka here kana chakaipa. Vaive vatotonga kare kuti kuita kwake kwaive kwakaipa.
JOHANE 7:25 Zvino vamwe veJerusarema vakati: Ko haazi iye wavaitsvaka kuvuraya here?
Kuita kwakaipa kwevakuru vezvitendero kwaive kwabuda pachena. Vanhuwo zvavo vaive vanzwa kare kuti vaida kuuraya Jesu.
JOHANE 7:26 Tarirai, unotaura pachena, vasingarevi chinhu kwaari. Ko vakuru vanoziva kwazvo kanhi kuti ndiye Kristu?
Vanhu vaive vashamiswa. Jesu aitaura pachena, hapana mukuru wezvitendero akataura chinhu.
Shoko rakanyaradza zvitendero zvenhema zvevatungamiri vezvitendero. Vaisagona kumupikisa, vakatarisana naye. Vatungamiri vezvitendero vakasarudza kunoronga nzira dzavo muchivande.
Vanhu vakatanga kuziva kuti vatongi vaive vakuziva kuti Jesu aive Messiasi. Asi Messiasi aituka vatungamiri vezvitendero. Messiasi aive atombomisa kuita kwavo mari muTembere. Saka aive asiriye Messiasi aidiwa nevatungamiri vezvitendero. Messiasi aive adaidza vatungamiri vezvitendero kuti vanyengeri.
Zano rakanakisa raive rekuuraya Jesu, zvaizomanikidza Mwari kutumira umwe Messiasi aitenderana nevatungamiri vechiJuda.
Vakafunga kuti Messiasi aizouya achibvumirana nezvaidiwa nemaJuda zvese.
Vatongi vechiJuda vaisada kushanduka kuti vabvumirane naMessiasi wavo.
JOHANE 7:27 Zvino uyu tinoziva kwaanobva, asi Kristu kana achisvika, hakunomunhu ungaziva kwaanobva.
Vakaedza kumuramba saMessiasi nekuti vaifunga kuti vaiziva kwaaibva. Semwana aive akurira muNazareta, akabva akaenda Kapenaume. Maguta aya ese aive muGarirea.
Asi, sekuita kwevanhu vanozvida vechitendero, vaive vasina kuita tsvagurudzo yavo zvakanaka, sezvo vasina chavaiziva pamusoro pekuzvarwa kwake muBeterehema, kana makore maviri aaive agarako kusvikira Josefa, mumashure mekushanya kwevazivi, akamutora akaenda naye kuEgipita kwemakore anoda kukwana gumi. Pamakore anoda kuita gumi nemaviri ndipo paakazoenda kunogara muNazareta.
MaJuda vaive vakakanganisika pamafungiro avo, vaifunga kuti Messiasi aizobva kuDenga nenzira inoshamisa uye inoonekwa nevazhinji. Munhu akazvininipisa uyu aibva Garirea ndiye Messiasi? Kana hazvibviri. Zvichibva pamafungiro avo, Messiasi aizoparadza maRoma pakusvika kwake. Vaifunga kuti Messiasi aizova mukuru kwazvo munezvehondo aizoita Israeri nyika huru kwazvo. Isu vanhu takanyura kwazvo munezvematongerwo enyika zvekuti tinoda kuti Mwari ashanduke aite zvatinotarisira isu.
Mukuita uku tinofuratira zvinhu zviduku zvemweya.
Messiasi anokwanisa kushanda ari Munhu mumwechete, achidzidzisa boka duku revanhu gumi nevaviri? Messiasi haazobviri atora munondo? “Hazvigoni”, ndizvo zvaifungwa nemaJuda.
Vaive vakatozadzwa kare nemafungiro avo vega, saka havaigona kutarisa humbowo hwezvishamiso uye dzidziso dzaJesu.
JOHANE 7:28 Zvino Jesu akadanidzira mutembere, akadzidzisa, achiti: Munondiziva, munoziva napandakabva; handina kuvuya ini ndimene, asi wakandituma ndiye wazvokwadi, wamusingazivi imi.
Vatungamiri vezvitendero vaisaziva Mwari aive atuma Jesu, uye aigara mumuviri waJesu. Vaigona kuona Munhu Jesu, asi havaigona kuona Mwari aive muna Jesu. Zvisinei nemabasa akaitwa naJesu.
JOHANE 7:29 Ini ndinomuziva, nokuti ndinobva kwaari; ndiye wakandituma.
Jesu aive Mwanakomana waMwari nekuti kuzara kwose kwaMwari kwaigara maari.
JOHANE 7:30 Naizvozvo vakatsvaka kumubata, asi kwakanga kusinomunhu wakaisa ruvoko kwaari, nokuti nguva yake yakanga isati yasvika.
Huvepo hweMweya unoshamisa hwakaparadzira goredema reruvengo raive pamusoro peJerusarema. Pakarepo maJuda vakaona kuti vaive vasina chavaigona kuita pachavo. Vaida kumuuraya, asi vaisagona. Mwari anotonga zvakazara pamusoro paDiaborosi. Kana Diaborosi achida kuita chimwe chinhu chinorwisa kuda kwaMwari kwakarurama, Mwari anomudzivisa.
JOHANE 7:31 Asi vamwe vazhinji vakatenda kwaari, vakati: Kana Kristu achizosvika, ungaita zviratidzo zvizhinji kunezvizvi zvakaitwa nouyu here?
Vanhu vazhinji vakatanga kutenda maari. Hakuna mumwe Messiasi aizogona kuita zvakadarika zvakaitwa naJesu pazvishamiso.
JOHANE 7:32 Zvino vaFarise vakanzwa vanhu vazhinji vachin’un’una izvozvo pamusoro pake; vaprista vakuru navaFarise vakatuma vatariri kundomubata.
Idzi dzaive nhau dzakaipa kuvakuru vezvitendero. Vanhuwo zvavo vaive vakutevera Jesu, zvisinei kubata kwakaipa kwaive nevatongi pamusoro pevanhu, kwavaiitira kuti vanhu vatye kuzvisanganisa naJesu nedzidziso dzake.
Saka vakatumira vanhu kunomusunga. Asi izvi zvaikatyamadza – vanhu ava vakakundikana kumubata, vakangonyangarika. Mazano akaipa evanhu ese haagoni kuita musiyano paZano Guru raMwari.
JOHANE 7:33 Ipapo Jesu akati kwavari: Ndichiri nemi nguva duku, ndigoenda kuno wakandituma.
Maive muna Gumiguru, pamutambo weMatumba. Jesu aizofa muna Kubvumbi panguva yePaseka. Saka kwaive kwasara mwedzi inokwana mitanhatu, “guva duku” kusvika paaizofa, omuka, okwira kudzokera kuDenga.
JOHANE 7:34 Muchanditsvaka, asi hamungandiwani; vuye apo pandiri, imi hamungasvikipo.
Nekuramba Jesu, maJuda vaizoramba vachitsvaga Messiasi wavo. Havaizomuwana mukati memakore 2000 ekuparadzirwa kwavo munguva nomwe dzemakereke.
MaJuda vaive muJerusarema vaizoroverera Jesu Kristu, saka vaisazoenda kunova naye seMuponesi wavo, kupfurikidza kuva maKristu.
Asi maJuda vakakumbira kufa kwake vakasatendeuka, vachava vakarasika nekusingaperi. Vachaenda kugehena, saka havazoende kuDenga.
Jesu ndiye ega Mukova wekuDenga. Hakuna muJuda, nemabasa ake nendangariro dzake, achagona kuwana nzira yekuenda kudenga.
JOHANE 7:35 Zvino vaJudha vakataurirana, vachiti: Uyu unoda kuendepiko, kwatisingazomuwani? Ko unoda kuenda kuna vakapararira pakati pavaHedheni, kuti andodzidzisa vaGiriki here?
Vakazvibvunza kana aizoenda kuvaHedeni. Neimwe nzira vaive nechokwadi. MaJuda pavakaramba Evangeri, mupostora Pauro akagona kuenda kuvaHedeni.
JOHANE 7:36 Rinoti kudiniko shoko iri raareva, rokuti: Muchanditsvaka, asi hamungandiwani, vuye, apo pandiri, imi hamungasvikipo?
Tarirai kudzokororwa kwepfungwa iyi.
MaJuda vaive varamba zvaaive ataura. Asi vakaramba vachifunga pamusoro pemashoko ake. Mashoko ake aive akafanana nezvirauro zvinopaikira munyama, zvisingagoni kubviswa zviri nyore. MaJuda vaisada kutenda maari, asi havana kukwanisa kukanganwawo zvaaive ataura. Paive nechakavanzika chikuru chaivepo chavasina kugona kuona. Asi pavaizofa vaizoona zvaaitaura.
Vairipira zvegumi zvavo kuvakuru vezvitendero zvavo, vaivatungamirira pakunoparadzwa kwavo kwekupedzisira.
Vakasangana naMessiasi vakamuramba. Totenda vatungamiri vezvitendero zvavo vaive nehuwori.
JOHANE 7:37 Zvino nezuva rokupedzisira, zuva guru romutambo, Jesu wakamira, akadanidzira, akati: Aninani, kana anenyota, ngaavuye kwandiri, amwe.
Pazuva rekupedzisira Jesu akavadana achivapa kekupedzisira, kuti ape Mweya Mutsvene kune avo vanotenda.
"Ngaauye kwandiri", Kuita kunobva pakutenda kuri mumoyo memunhu. Tinouya kuna Jesu chete. Kwete kune mumwe munhu. Kwete kune zvinowanikwa mukereke.
ChiKristu chinotangira pakutendeuka. Mabasa akanaka haagoni kutiponesa. Tinotendeuka togamuchira Jesu saShe naMuponesi wedu. Tinobva tatanga kuva neruwadzano pachedu naShe wedu. Ruwadzano urwu runobva pakutenda kuti Bhaibheri reKing James Vhezheni ndiro Chokwadi Chikuru. Ruwadzano rwedu runobva pakutenda kuti Jesu, Shoko, rega ndiro rinogona kutitungamirira muhupenyu hwedu kuti tisvike paChokwadi.
Vanhu vanotiudza kuti “tive nhengo dzemakereke” -- kutaura kusimo zvachose muMagwaro.
Saka, zvinosuwisa, tinochinjanisa ruwadzano rwedu naJesu neruwadzano nekereke, kwatinotenderana “nekufunga kweboka” revanhu ivavo. Tinobva tatsvaga kutenderwa neboka revanhu ivavo vanoenda kukereke, kunyanya mutungamiri wekereke. Tinopfeka chivharachiso chekuenda kukereke chinobvumirana nezvinotarisirwa nevanhu vekereke iyoyo. Saka tinobva tazviita maKristu echinzvimbo chechipiri. Tinenge tachinjanisa chiKristu nechi “chechi-chechi”.
Jesu akadanidzira, “Huyai kwandiri”, kuti atiyeuchidze kuti tinofanira kuva vake neBhaibheri reKing James Vhezheni chinova chinhu chekutanga. Bhaibheri harina kubvira rataura kuti tinofanira kuva vekereke.
Kune ndudzi dzemasangano emakereke dzinodarika 45000 dzakasiyana. Chiii chinoita kuti mufunge kuti kereke yenyu ndiyo ine chokwadi?
Pamusoro pazvose, rimwe nerimwe remasangano emakereke 45000 akasiyana iwayo rinoti ndiro rine chokwadi chakazara. Asi ese akasiyana. Saka pakati pawo pane rinenge risingatauri chokwadi.
Mvura dzichibva mukati make?
Izvi zvinonzwisisika kana tikatarisa muviri waJesu wakaturikwa pamuChinjikwa neTabernakeri yemaJuda iri murenje.
Zvino chitarisai muchiona Jesu ari paMuchinjikwa pamusoro peTabernakeri.
Tsoka dzake dziri mundimi dzemoto dzearitari yezvipiriso.
ZVAKAZARURWA 1:15 Tsoka dzake dzakanga dzakafanana nesafuri inopenya, inenge yakanatswa muvira; inzwi rake rakanga rakaita senzwi remvura zhinji.
Chinhu chinotevera ivira remvura rekusukira. Ndipo panoita mukati make.
Kubva mukati make ndimo munoerera hova dzemvura inorarama. Zvichida idzi dzichimiririrwa nemucherechedzo wemunondo wemaRoma wakamubaya, mvura neropa zvikabuda maari.
Chipfuva chake nemavoko ake zvinoita Nzvimbo Tsvene. Chipfuva chake nemuroma wake panowira musoro wake pasi zvinomiririra aritari yezvinonhuwira, mucherechedzo weminamato.
ZVAKAZARURWA 8:4 Vutsi bwezvinonhuwira bwukakwira pamberi paMwari bwuchibva muruvoko rwomutumwa pamwe chete neminyengetero yavatsvene.
Mavoko ake akatambanudzwa kunosvikira chigadziko chemwenje minomwe, mucherechedzo wenguva nomwe dzemakereke. Rumwe ruvoko rwakanosvika pazvingwa gumi nezviviri zvekuratidzira, zvinomiririra maJuda 144000 kubva mumarudzi gumi nemaviri aIsraeri.
Nzvimbo Tsvene tsvene ndiwo musoro wake nepfungwa dzake, umo zvakavanzika zvaMwari zvakadzama zvinogara kuseri kwechidzitiro chenyama yake.
Mvura inopa hupenyu panyama. Mweya Mutsvene unopa hupenyu hweMweya.
"Unotenda kwandiri", Zvinomiririra mifungo kana ndangariro kana mweya unoberekwa nekutenda kuri mumoyo memunhu kana mumweya wemukati. Ndangariro idzi dzinofanira kubva paMagwaro. Kutenda kunobva paMagwaro kunokurudzira mabasa edu kana kuita kwedu.
Mweya wemukati kana moyo munda unodiridzirwa neMweya Mutsvene. Mbeu yeShoko raMwari inodyarwa mumunda wemoyo. Mbeu inomera kuti itonge mweya kana ndangariro. Ndangariro dzepfungwa dzinozotonga muviri.
JEREMIA 31:12 mweya wavo uchava somunda wakadiridzwa,
Ndangariro nemweya zvinoshandiswa chimwe pachinzvimbo pechimwe muMagwaro. Saka zvinoreva chinhu chimwechete.
VAROMA 8:10 asi mweya mupenyu
I SAMUERI 25:29 mweya washe wangu ucharamba wakasungirwa pachisote chavapenyu vari kuna JEHOVA Mwari wenyu,
Mweya wemunhu wemukati kana ndangariro wakaputirwa mukati mwemweya wehupenyu.
Mumoyo kana ndangariro kana mweya wemukati wemunhu ndimo munokura Shoko raMwari seMbeu. Mweya wemukati kana moyo ndimo munosimbiswa kutenda kwedu muShoko raMwari.
Uhu ndihwo hurongwa hwazvinoshanda nahwo. Mweya ndiwo mvura inodiridzira munda wemoyo kana mweya wemukati kana ndangariro, umo Mbeu yeShoko raMwari inodyarwa. Mbeu yeShoko inomera yoratidzira mifungo yedu kana mweya, zvinozogona kuunza muviri pakuzvininipisa kuShoko raMwari.
JOHANE 7:40 Zvino vamwe pakati pavanhu vazhinji vakati vachinzwa mashoko awa vakati: Zvirokwazvo uyu muprofita.
Vanhu vazhinji vakaona kuti kudzidzisa kwake kwaibata zvinhu zvakadzama. Havana kunzwisisa zvakazara zvaaitaura, asi vaiziva kuti vaiterera kuMuprofita mukuru aiparidza zvinhu zvakadzama kwazvo.
"Uyu muProfita": Kwete muprofitawo zvake, asi Muprofita. Mosesi aive ambotaura pamusoro pake.
JOHANE 7:41 Vamwe vakati: ndiye Kristu. Asi vamwe vakati: Ko Kristu ungabva Garirea here?
MuchiHeberu, Messiasi zvinoreva kuti “Akazodzwa” zvinoshandurwa zvichinzi “Kristu” muchiGiriki.
Havana kuwana chiro pamusoro paKristu muGarirea, nekuti Kristu aizobva kuBetrehema.
JOHANE 7:42 Rugwaro haruna kureva here, kuti Kristu uchabva, kurudzi rwaDavidi, napamusha weBetrehema, paiva naDavidi?
Vaive vasina kuita tsvagurudzo dzavo. Jesu aive aberekerwa Betrehema akagarako kwemakore maviri kusvikira vazivi vauya kwaari vakamuwana mumba ava mwana, kwete rusvava. Josefa haana kutaurwa nezvake epapo.
Asi muprofita Jona akabva muguta reGatiheferi muGarirea, riri pamakiromita mashanu kubva muNazareta. Aive mudumbu mehove huru kwemazuva matatu, waive mucherechedzo wakanakisa waJesu achivigwa nekumuka kubva kuvakafa.
JOHANE 7:43 Naizvozvo kupesana kwakamuka pamusoro pake pakati pavazhinji.
Jesu aive munhu wevanhu. Vanhuwo zvavo vaimuda, asi vaya vaive mbwende dzaiterera vatungamiri vezvitendero zvavo vaimuvenga. Zvimiro zvemasangano ezvechitendero zvinovenga chokwadi nguva dzese.
JOHANE 7:44 Vamwe vakanga vachida kumubata; asi kwakanga kusina wakaisa mavoko kwaari.
MaJuda vaida kumusunga kuti vamuuraise. Asi zvisinei, nekubata kwemweya, Mwari akaisira maJuda muganhu.
JOHANE 7:45 Zvino vatariri vakavuya kuvaPrista vakuru nokuvaFarise, ivo vakati kwavari: Makaregereiko kuvuya naye?
Vanhu vakabuda kunosunga Jesu vakauya vasina munhu.
JOHANE 7:46 Vatariri vakapindura, vakati: Hakuno munhu wakatongotaura somunhu uyu.
Vatariri vaive vaenda kunomusunga vakanyaradzwa nesimba rekuparidza kwake. Vaiziva kuti aiparidza zvinhu zvaive zvakadzama kwazvo kuti vazvinzwisise. Vaive vakatyamadzwa neruzivo rwake uye muono wake mukuru. Airatidzika kuva nesimba rese.
JOHANE 7:47 Naizvozvo vaFarise vakavapindura, vakati: Nemi vo matsauswa kanhi?
VaFarise vaive vasina kutaurwa muMagwaro vaive vatungamiri venhema. Maive musina zita rechinzvimbo rakadaro muTestamente Yekare. Vaive vanyengera maJuda nekuisa chinzvimbo chehutungamiri vasina kuwana simba kubva muMagwaro, apa vaive votaura kuti Jesu aive anyangera vanhu.
JOHANE 7:48 Kuvakuru nokuvaFarise kuno mumwe wakatongotenda kwaari here?
VaFarise havana kubvunza Magwaro kuti vawane simba ravo, nekuti hakuna Magwaro eTestamente yekare anotaura nezvavo. Saka vaitaura nezvevatungamiri vezvitendero vakaita savo. Vaifunga kuti munofanira kutenda zvese zvamunoudzwa nezvinotendwa nevatungamiri vezvitendero.
Asi vaiziva kuti vanopokana pamusoro pezvinhu zvizhinji nevaSeduse vanofambisa zvinhu muTembere, uye vaisatenda mukumuka kwevakafa. Saka kutaura kwavo vachitaura zvakataurwa nevamwe vatungamiri kwaive kwakarasika kwazvo. Vatungamiri vezvitendero vemakereke nhasi vane masangano emakereke nezvitendero zvinodarika 45000 zvakasiyana. Chokwadi chiri pachena kubva pachimiro chakadai ndechekuti hatifaniri kuvimba nevatungamiri vemakereke vanhasi sezvakaita maJuda vakatenda muvatungamiri vezvitendero zvavo.
JOHANE 7:49 Asi vanhu ava vasingazivi murairo, vakatukwa.
Nekusaziva kuti Jesu aive akaberekerwa muBetrehema, zvakaprofitwa kwavari zvakava zvisizvo. Hakuna murairo weTestamente yekare wakataura kuti vave vaFarise. Saka vakatokanganisa zvakare ipapo. Nekutenderana nevatongi vaive vashandura Tembere kuita nzvimbo yekuitira mari, vakatadza zvakare ipapo. Nekupomera Jesu, vakatsvaga kumuuraya asati atongwa zvakanaka, vaFarise vairwisa murairo wavo vega.
Saka murairo waituka vaFarise kwete Jesu.
JOHANE 7:50 Nikodimo, (uya akavuya kwaari (Jesu), waiva mumwe wavo, akati kwavari:
Nikodimo aive mumwe wavo pakati pavo aitaura nekururama.
JOHANE 7:51 Murairo wedu unotonga munhu, usati wambomunzwa, nokuziva chaanoita here?
Nikodimo aiziva kuti Murairo waida kuti munhu atongwe zviri pachena zvakaringana asati apomerwa. Nekuramba vachiti vaifanira kushandisa Murairo zvakanaka, Nikodimo aive akanganisa zano ravo raive rakaipa kwazvo.
JOHANE 7:52 Vakapindura, vakati kwaari: Ko newe vo uri weGarirea here? Nzvera,uvone kuti hakuno muporofita, unobva Garirea.
Chero munhu anorwira chokwadi anorwiswa. Vakapomera Nikodimo nhema kuti aive wekuGarirea. Kupomera kwavo kukuru ndekwekuti hakuna muprofita anobva Garirea.
Asi ipapo vaive vachitadza zvakare. Muprofita Jona aibva muguta reGatiheferi muGarirea, makiromita mashanu kubva muNazareta.
II MADZIMAMBO 14:25 Akakundazve nyika yaIsiraeri, kubva pavanopinda paHamati kusvikira pagungwa reAraba, sezvakarehwa neshoko raJEHOVA, Mwari waIsiraeri, raakataura nomuromo womuranda wake Jona, mwanakomana waAmitai, muporofita weGatiheferi.
JOHANE 7:53 [Ipapo mumwe nomumwe wakaenda kumba kwake.
Izvi zvinotiyeuchidza pamusoro peBhuku raVatongi umo vanhu vese vakaita zvavaiona nemeso avo ivo zvakanaka.
Nekupomera Mikodimo nhema nekuti aida kuti vashandise murairo zvakanaka, vaFarise vakapararira sezvo vakanga vatadza kuparadza Jesu. Vaizononanzva maronda avo, vonoronga kuzobata Jesu pamutambo mukuru waitevera, mutambo wePaseka wegore 33 AD.